Nuxurka Iyo Qisooyinka Dhabta Ah Ee Ay Ku Yimaaddeen Qaar Ka Mid Ah Heesaha Cabdiqaadir Xirsi Yamyam — Q:3aad | FooreNews
Home wararka Nuxurka Iyo Qisooyinka Dhabta Ah Ee Ay Ku Yimaaddeen Qaar Ka Mid Ah Heesaha Cabdiqaadir Xirsi Yamyam — Q:3aad
Nuxurka Iyo Qisooyinka Dhabta Ah Ee Ay Ku Yimaaddeen Qaar Ka Mid Ah Heesaha Cabdiqaadir Xirsi Yamyam — Q:3aad
Waakan Alla Ha U Naxariistee Abwaan Yamyam oo arrinkaasi innooga warramayaa: “Ninkii baannu is waraysannay. Bal sida loo hayo iyo waxan ku dhacay?. Waxa uu igu yidhi: “Gabadh baan jecelahay. Gabadha waxa la yidhaahdaa Aamina. Magaceedii kale ma garanayo. Jaamacadda Lafoole ayay dhigataa. Waannu is baranay. Laba sano illaa saddex sano ayaannu wada soconay oo haasaawuhu naga dhaxeeyey. Aabbaheed waan soo xejisiiyey. Baabuur baan u gaday oo aan u iibiyey. Waan is guursanaynaa ayay tidhi. Dabadeed markaan wax walba u dhammeeyey ee aan xataa gurigii aannu isku aroosi lahayn dhisay ee aan u diyaariyey. Xataa gurigaasi ninkaasi wuu na soo tusay oo waxa uu ahaa guri aad u qurux badan oo aad yaabto. Markii arrinku halkaa marayo ayuu yidhi ninkii waxa ay gabadhii igu tidhi kuma rabo oo aabbahay baad iga tahay!. Marbaan dambay buu yidhi in aan is dilo mar waxaan dambay in aan iyadii dilo oo baastoolad baan u qaatayba. Tash badan iyo walaahow baa igu dhacay buu yidhi. Marka arrintaa markii aan dad badan kala tashaday waxa la igu yidhi buu yidhi suugaanta ayaa arrinkaaga wax lagaga qaban karaa ee ragga suugaanyahanka ahi hakuu hiiliyeen ee u tag”.
Alla Ha U Naxariistee Abwaan Cabdiqaadir Xirsi Yamyam oo ninkan xaaladdiisa dhinaca fanka iyo wixii intaa ka dambeeyey ka sii hadlayaa waxa uu yidhi: “Ninkan xaaladdani ku dhacday xagga fanka iyo suugaanta iyo waxaasi nin ay u bilaaban yihiin ma aha. Warbaahinta caalamka iyo waxaasi oo dhanba ninkani shaqo kuma laha. Raadiyaha Maxadada Radio Muqdisho ma gaysan garanayo iyo BBC-da toona. Waa ka madawdahay. Hawlo kale iyo guryo dhis iyo baabuur iibin iyo arrimahaasi mooyee ma aha nin baddaa kale ku jira oo waxba ka garanaya”. Ayuu yidhi Abwaan Yamyam.
Maxaa intaasi xigay haddaba?. Markii Abwaan Cabdiqaadir Xirsi Yamyam iyo Fannaankii Salaad Darbi ay ninkii waraysteen ee arrinka ay fahmeen maxaa haddaba xigay?, waakan Abwaan Yamyam oo qisadan innooga sii warramayaa: “Ninkii baannu is raacnay. Meel baannu fadhiisanay. Wuu noo seekeeyey. Gabadhii in la ila qabto ayaan rabaa buu yidhi ninkii oo xaajada ku soo ururiyey iyo arrinkiisii. Halkii aannu fadhinay waxaan isla markiiba ku sameeyey oo aan ku tiriyey hees la yidhaa ‘Samirkii Ayuub’. Imika ma hayo heestaasi midhaheeda. Heestaasi iyana waxaan markaa u dhiibay Cabdalla Yuusuf Hanuuniye. Abwaan Cabdijariin Jiir ayaa igu yidhi magaalooyinka way taallaa iyada oo duuban balse anuu garan maayo. Heeso badan oo heesahayga ka mid ah oo kale waxba kama hayo oo waxa ay raaceen wixii burburay ee la bililiqaystay. Heestii markii aan tiriyey ee Abwaan Cabdikariin Faarax Qaarxay (Jiir) uu laxanka saaray ee Cabdalla Yuusuf Hanuuniye qaaday ayaa la duubay oo gabadhii loo geeyey. Waa Heestii ‘Samirkii Ayuub’. Nasiib darro heestaasi waxba kama ay qaadin gabadhii oo way kari wayday. Kumay duxin waxna kamay tarin oo gabadhii way soo dabcin wayday”.
Sidaa uu sheegay Abwaan Cabdiqaadir Xirsi Yamyam isku daygoodii hore way ku fashilmeen oo heeskii ay gabadhii farriin ahaanta ugu direen ee ‘Samirkii Ayuub’ waxba way ka tari wayday gabadhii sidaa uu innoo sheegay. Maxaa xigay haddaba ee ay tallaabo qaadayaan Abwaan Yamyam iyo saaxiibadii oo ah intii qisadan gacanta ka gaysanaysay si ay gabadha ku soo jiidaan maadaama ay doonayeen in ay gabadha qalbigeeda soo jiitaan oo ninkan Cismaan Kulmiye Fagaas ugu soo gacan galiyaan.
Markii ay xaaladdu halkaasi marayso ee Heeskii ugu horreeyey ee uu Abwaan Yamyam sheekadan ka sameeyo ay waxba ka tari wayday gabadhii maxaa xigtay ee ay tallaabo qaadeen?..
Previous PostMudanayaasha Golaha Wakiillada Somaliland Oo Su’aalihii Ugu Cuslaa Shalay Ku Miisay Wasiir Sacad Shire Next PostGuddida Madaxweynuhu U Xulay Dejinta Sixir Bararka Oo Shirkadaha Isgaadhsiinta Amaro Culus Ku Soo Rogay, Kuna Baraarujiyay Mudadii Ay U Qabteen Oo Bari Ku Eg